Amadolobha amahle kakhulu eSpain | Ukuhamba kwe-Absolut
U-Alberto Legs | | Barcelona, Córdoba, España, Madrid, Salamanca, Toledo
Uma kukhona ubuhle obulodwa obuchaza iSpain, ukuhlukahluka nokuphambana kwezilungiselelo zayo. Singashushuluza ePyrenees bese sishiswa yilanga esiqhingini esinesimo sezulu esishisayo, bese sizilahle emigwaqweni yamazwe ahlukahlukene eMadrid noma sibheke emapalabala amibalabala ase-Andalusia. Ubunye obuqinisekiswe ngu amadolobha amahle kakhulu eSpain ukuthi sikulethela okulandelayo.
8 I-Santiago de Compostela
Idolobha eliyintandokazi yalo mbhali lisalondoloze ingxenye yefa lamaRoma, lamaJuda, lamaSulumane nelamaKrestu eligcwele imigwaqo, izakhiwo namabhuloho alesi simanga sase-Andalusia. I- Isikhungo Somlando saseCórdoba, siqokelwe indawo eyiGugu Lomhlaba, izungeze i-mosque yayo ebabazekayo, isibonelo sezakhiwo zaseMudejar naphezu kwemizamo yeSonto yokulisondeza endaweni yamaKatolika. Iphoyinti elihle kakhulu ngaphambi kwesithombe esijwayelekile ku- Ibhuloho lamaRoma, i-salmorejo enhle ejwayelekile komunye wemigoqo yayo noma ukuvakashelwa kwe ama-patio adumile eCordovan ezakha umkhosi wokuthi uMeyi ngamunye akhombise ingubo yephunga nombala kulo lonke idolobha. Uma futhi unesikhathi sokugcina, ungahlala ufika ku- idolobha lasePalatine iMedina Azahara, ifa lokugcina le-Unesco endaweni yaseSpain.
Uma uhamba emigwaqweni yaseSeville uyabona ubukhulu buphi kubo amadolobha amahle kakhulu eSpain. Idolobha lakhona elidala, enkulu kunazo zonke eYurophu eduze kwaseVenice naseGenoa, yisampula sobukhazikhazi bayo bekhulu leminyaka obakhiwe ngezakhiwo eziningi: ILa Giralda, iTorre del Oro eyisithonjana ebheke eGuadalquivir noma i-Alcazar ejabule esetshenziswa njengesimo ku-Game of Thrones ziqhathanisa naleyo Seville yokuhlola ngendlela yombono wesikhathi esizayo (i-Las Setas) noma ubuciko obuphefumulwa nge-folkloric Indawo yaseTriana. Ngaphandle kokungabaza, idolobha elihle kakhulu ukugqugquzela leyo ndlovu yase-Andalusi egxuma isuka ehhashini iye ehhashini emigwaqweni yaseSeville.
Ambalwa amadolobha abonisa ubuhle beBarcelona. Idolobha lamazwe omhlaba jikelele eSpain hhayi kuphela ingxenye yendwangu yasedolobheni edonselwe ngokuphelele futhi ethonywe yiParis yaseHaussman, kepha futhi inika namehlo umsebenzi ka-Antonio Gaudí lokho kusatshalaliswa ngamakhona angalindelekile eBarcelona, kusuka eSagrada Familia engakaze iphefumule noma iPark Güell lokho kuthembisa i-labyrinth yezimpawu nombala oyingqayizivele. Icindezelwe ulwandle, iBarcelona yondliwa yimpilo eyingqayizivele yasebusuku kanye namasiko ngokusebenzisa izindawo ezinjenge-bohemian Gràcia noma isifunda sabomdabu saseBorn esizophela phakathi kwephathi nomoya omnandi emabhishi afana AbakwaBarceloneta noma, engikuthandayo, iMar Bella, ekugcineni kwendawo enganconyiwe Poblenou.
Waziwa ngokuthi "Idolobha lamasiko amathathu" Ngokuhlanganisa ndawonye abantu abangamaKristu, abangamaJuda nabamaSulumane iminyaka eminingana, iToledo yasendulo isakazeka phezu kwegquma elibheke emfuleni iTagus lapho inethiwekhi yayo yemigwaqo emincane nezikhombo zomlando weCastile zenza idolobha laseLa Mancha lijabulise izinzwa . Isikwele seZocodover kumaka ukuqala komzila phakathi kwezingcezu zomlando, isonto elikhulu laseToledo, amasinagoge, amabhalkhoni akwesinye isikhathi noma izitolo zommese eziphikisana nezamuva umkhuhlane we-gastronomic okukhishwe edolobheni phakathi kwezitsha ezinjenge-carcamusas, i-migas noma i-cochifritos.
Isizinda samasiko nomlando, iSalamanca iyaziqhenya eyunivesithi endala kunazo zonke eNtshonalanga njengobufakazi bohlamvu olulodwa olukhonjiswa ngendlela ye amasonto ababhishobhi amabili - elidala nelisha -, iSonto LaseSan Esteban noma iSonto LaseSantiago. Izithonjana ezakha a Isikhungo Sezomlando siqoke Indawo Yamagugu Omhlaba olandelwa yisimo salo njengeDolobha laseYurophu Lamasiko noma iSonto Elingcwele elibhekwa njengeNzalo Yezokuvakasha Kazwelonke. Ngoba kulapha, eSalamanca, lapho umlando wabathandi beLa Celestina uphefumulelwa ezingadini zawo zezithelo namagama afana noCristóbal Colón noma u-Antonio de Nebrija aphinde avele phakathi kwaleli dolobha eliyingqayizivele.
Eyaziwa nangokuthi «Donostia», okungenye ye amadolobha amahle kakhulu eSpain iyaqhubeka nokuheha izivakashi nababukeli abeza kuleli pharadesi elidala le-spa ukuthi maphakathi nekhulu leshumi nesishiyagalolunye banqotshwa ukubukeka kobuFrance nonxiwankulu ngokwakhiwa kwalo. ICathedral yoMelusi Omuhle noma iTown Hall izibonelo ezimbili ezinhle zesitayela se-neo-gothic esedlula ngeDolobha laso Elikhulu ukucindezela ukukhanga okukhulu kweSan Sebastián: Ibhishi laseLa Concha.
Yonke iSpain iseMadrid, lelo dolobha ligcwele ukuqhathanisa lapho sonke singazizwa njengezingane zokutholwa namathonya azo ahlangana ne-microcosm eyingqayizivele yomhlaba. Kusuka ezindaweni ezinesithonjana esifana naleyo Gran Vía ekhomba indlela edlulayo iminyuziyamu yezithonjana ezinjengeReina Sofía noma i-El PradoKusukela kubuzwe beLavapiés, umoya weLa Latina, ubukhazikhazi bezimakethe zayo noma umhlaba ongaphansi ovalelwe e-El Retiro, iMadrid ayiphefumuli lapho ifika ekutholeni wonke amakhona ayo. Uma futhi unesikhathi sokugcina, ungahlala njalo vakashela i-Aranjuez nesigodlo sayo esihle nezingadi noma ukulahleka emahlathini aseSierra de Madrid okuqinisekiswa njengedayimane endaweni enzima yokulungiswa komhlaba.
I-Santiago de Compostela
Kanye neJerusalema neRoma, iSantiago de Compostela yakha enye ye izikhungo ezinkulu kakhulu zokuhambela emhlabeni, kukhanya intelezi nesithunzi njengezinye izindawo ezimbalwa. Kuthathwa njengenye ye- amadolobha amahle kakhulu eSpain, eGalicia, kuvalwe edolobheni lakubo elikhethwe njengeNdawo Yamagugu Omhlaba a I-Catedral de Santiago lapho ithuna lomphostoli odumile liheha izinkulungwane zabantu, abavela ezindaweni ezahlukene, abaqala unyaka nonyaka abadumile Umgwaqo kaSantiago.
Kusukela kumlando wabantu baseSeville kuya ebuhleni beSan Sebastián, iSpain iqinisekisa amandla ayo njenge-mecca yokuqhathanisa, umlando namasiko ayingqayizivele.
Yini, ngokombono wakho, amadolobha amahle kakhulu ku España?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Amadolobha amahle kakhulu eSpain
Porto ezinsukwini ezimbili